Phototonic: Sawir khafiif ah iyo Qabanqaabiyaha Sawirka | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan raadinayay a sawir iyo qabanqaabiyaha sawirka ka dhigo mid ka madax banaan deegaanka desktop, oo waan helay Fototonic. Sida aan u isticmaalo MATE Desktop Environment ee Debian Jessie, maadaama aan ahay taageere lagu dhawaaqay GNOME2, ma aanan dooneynin inaan rakibo waxyaabaha caadiga ah g Thumb sababta oo ah isdhaafsiga isticmaalaha ugu dambeeya waa kan GNOME3, runtiina ma jecli deegaankaas in badan.
Hagaag, waan rakibay Fototonic qaybtiisa 1.4.0 oo waxaan si farxad leh ula yaabay faa'iidooyinka ay sheegato inay leedahay - oo ay leedahay - sawir-qaadaha iyo qabanqaabiyaha Linux, kaas oo ku qoran C ++ iyo Qt 5.3.2. Sidaa awgeed isticmaalkeeda hooseeya ee kheyraadka, xawaaraha iyo sahlanaanta isticmaalka.
1 Astaamaha Phototonic
2 Sida loo rakibo Phototonic
2.1 Ku rakib Phototonic Ubuntu iyo Derivatives
2.2 Ku rakib Phototonic on Arch Linux iyo Derivatives
Sifooyinka abaabulaha sawirkan, sida ku cad abuurayaashiisa waa:
Aad u khafiif ah oo leh muuqaal fidsan oo cad
Kuma xirna jawi desktop ah
Waxay leedahay taageero qorshayaal horudhac kala duwan ah - suugaanta
Adiga oo adeegsanaya geedka galka, rakibo aragtiyada oo ku soo celceli sawirada si isdaba joog ah
Raridda horudhaca waa mid firfircoon waxayna awood u siineysaa daalacashada degdegga ah ee faylalka waaweyn ama leh sawirro badan
Kuu ogolaanayaa inaad ku shaandheeyo magaca horudhaca
Muuqaal Sawir - Bandhigga galka
Sawirrada waa la beddeli karaa, si toos ah ama xagal ahaan ah loogu rogi karaa, loo jarjarayaa, loo qiyaasi karaa, isla markaana waa loo wada eegi karaa xulashadaada Qaab -dhismeedka lagu helay muuqaalka muuqaalka ugu muhiimsan adigoo gujinaya badhanka midig ee midig.
Kuu ogolaanayaa Zoom otomaatig ah ama buug
Waxay taageertaa BMP, GIF, ICO, JPEG, MNG, PBM, PGM, PNG, PPM, TGA, XBM, XPM iyo SVG, SVGZ, TIFF qaabab muuqaal ah plugins.
Gawaarida kumbuyuutarka iyo habdhaqanka jiirka ayaa la habeyn karaa
Waxay taageertaa buuxinta tooska ah ee sawirrada iyo tusaha xariiqda taliska
Kuu ogolaanayaa inaad la furo muuqaalada la daawade dibadda
Sida loo rakibo Phototonic
para ku rakib Phototonic wixii qaybinta Linux ahKaliya halkan ka soo dejiso nooca ugu dambeeyay ee qalabka. Kadib waxaan fureynaa terminal waxaanan fulin doonaa amarradan soo socda:
Ku rakib Phototonic Ubuntu iyo Derivatives
Fur terminal oo socod amarada soo socda:
$ sudo add-apt-repository ppa: dhor / myway $ sudo apt-get update $ sudo apt-get rakib phototonic
Ku rakib Phototonic on Arch Linux iyo Derivatives
Arch LInux iyo adeegsadayaasha soosaara ayaa isticmaali kara kaydinta AUR si loo rakibo Phototonic, si tan loo furo terminal oo loo socodsiiyo:
Saaxiib Akhriste: haddii aad u baahatid nal, aad u dhakhso badan, iyo muuqaal sawir-qaade iyo abaabule, ha ka waaban inaad rakibto barnaamijkan cajiibka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Phototonic: Sawir khafiif ah iyo qabanqaabiye sawir
Waxaan door bidaa isha isha, waxay leedahay shaqooyin wareegsan, iwm.
Waxaan kale oo isha ku hayaa isha MATE-ga oo ah ikhtiyaarka ugu horeeya waana midka aan isticmaalo marka aan ku daalaco feylasha Sanduuqa. Laakiin waa wax aan la dafiri karin in muuqaalka guud, Phototonic uu ka fiican yahay. Xaaskeyga wey jeceshahay. 😉
Hagaag, waxay umuuqataa mid aad ufiican 😀
Phototonic ma aha oo kaliya wax sawir qaade, sida Eye, Feh, Mirage, Geqie, Qiv ama Photoqt ama kuwa kale oo badan ay noqon karaan. Waxay leedahay taas iyo browser / maareeyaha faylka. Taasina waa waxa ay kaga duwan tahay kuwa kale markaa lama barbar dhigi karo kuwaas.
Taasi waa sababta ay uga fiicantahay. Ugu yaraan aniga ahaan. Waana la mid ama ka dhakhso iyo fudeyd kuwa kale kuwa kaliya leh daawadayaasha laakiin aan lahayn jawi toos loogu maareeyo sawirada.
Marwalba waxaan isbarbar dhigayaa daawadayaasha sawirka leh Acdsee (daaqadaha) mana aanan arkin wax kafiican ama ka dhaqso badan Linux. Xaqiiqdii, marka la eego isticmaalka xusuusta, waxaan xaqiijiyay in acdsee32 v.2.41 oo lagu rakibo khamri uu aad uga yaryahay kan ugu fudud Linux. Dabcan, way gaabis tahay marka la rakibayo deegaanka.
Laakiin sida aan u isticmaalo Linux waxaan go'aansaday qimgv.